Zokupheka | Eyedwarha 2021
I-Calorie ephantsi: I-Oats Roti Recipe
Nalu ukhetho olufanelekileyo lokusebenzisa i-oats, Oko kukuthi, ngendlela yokwenza i-oats roti. I-Oats yinto etyebileyo enefayibha yokutya, enokusetyenziswa ngabantu abatya ukutya okungqongqo kwaye bafuna ukunciphisa umzimba. Iphantsi kweekhalori kwaye ityebile kwi-beta-glucan, leyo yinto enkulu yokunciphisa i-cholesterol.
I-Bitter Gourd Juice Recipe yeswekile | Ubunzima-bokuncipha Juice Recipe
Umqala obukrakra, okanye uKarela, yenye yezo veggies apho sonke sinolwalamano olunenzondo nothando; kodwa ubusazi ukuba ukongeza iresiphi ekrakra yejusi inokulawula kakhulu inqanaba leswekile yegazi lakho? Le recipe yejusi ithathwa njengenye yezona ndlela zonyango ezifanelekileyo kwizigulane zesifo sikashukela.
Iresiphi emhlophe yeSauce yePasta: Ungayilungisa njani ekhaya
Ngaba uzimisele ukuzama iresiphi emnandi njengoko ilungiselelwe kwiivenkile zokutyela? Ewe, emva koko unokuzama ipasta emhlophe yesosi. Esi sisitya esilungiselelwe ngekhrimu, ubisi, itshizi kunye neminye imifuno emitsha. Skrolela ezantsi kwinqaku ukuze ufunde ngakumbi.
Ungayilungisa njani ikhalori eseGreyini yeGosa eDosa ekhaya
I-gram dosa eluhlaza sisitya sendabuko saseMzantsi India. Bukela ividiyo ngendlela yokwenza i-gram dosa eluhlaza ngenkqubo yenyathelo ngenyathelo enemifanekiso.
I-Veg Spring Roll Recipe: Uyenza kanjani iVeg Roll ekhaya
I-Veg Spring Roll sisitya esimnandi esilungiselelwe kusetyenziswa i-rotis kunye nokuzaliswa kwemifuno. Ukuzaliswa kuguqulwe kwilangatye eliphezulu kwaye kubekwe embindini weeroti kunye nesosi ethile. Ukwazi ukuba ungayilungisa njani le iresiphi imnandi, skrolela ezantsi kwinqaku ukuze ufunde ngakumbi.
Bhaka ikhekhe lakho kupheke uxinzelelo kunye nale Recipe
Ngaba ujonge ukubhaka ikeyiki uwedwa, nayo ngaphandle kwe-oveni? Kulungile ke awufanele uye nakweyiphi na indawo njengoko silapha ngeresiphi eya kukunceda ukubhaka ikeyiki kwisipheki soxinzelelo.
Iresiphi yePaneer Makhani (Uhlobo lweJain): Akukho anyanisi Akukho Garlic Paneer Butter Masala
IJain-style paneer makhani ilungiswa ngamaNdiya aseMantla ngexesha leminyhadala yokuzila ukutya okanye iivrats, njengoko ingaphekwanga ngetswele kunye negalikhi. Funda indlela yokwenza th
I-Carrot Orange Juice Recipe | Ubunzima bokuPhulukana neJusi Recipe | Iresiphi eyiJeice esempilweni
Iresiphi yencindi yomnqatha weorenji yaziwa ngokuba igcwele ii-antioxidants, iivithamini kunye neeminerali. Ngenxa yoko, ukongeza oku kwindlela yokutya yemihla ngemihla kunceda ukuba unciphise umzimba, kuyenze yomelele inkqubo yakho yokukhuseleka kwaye ikunike oko kukhanya kobutsha kwiiveki ezimbalwa.
IJain-style Paneer Pulao Recipe: Akukho anyanisi Akukho Garlic Paneer Pulao
I-Paneer pulao (isitayile seJain) yikhosi ephambili eyonwabisayo elungiselelwe ngokukodwa ngaphandle kwetswele negalikhi. Jonga kwaye ufunde indlela yesimbo seJain
Itheko elikhethekileyo: Iresiphi yeMotichoor Ladoo; Uyilungiselela njani iMotichoor Laddoo Ekhaya
IMotichoor ladoo siswiti yemveli yaseIndiya elungiselelwe ikakhulu iminyhadala. Funda kwaye ulandele inkqubo eneyinyathelo nenyathelo.
I-Dal Baati Recipe: Uyenza njani iDal Baati Ekhaya
I-Dal baati yidal ebabayo kunye ne-baatis eqhekezayo esecaleni kwaye sisitya esidumileyo seRajasthani cuisine. Funda indlela yokwenza iresiphi ye-dal baati kwi-ho
I-Recipe ye-Ladoo | | Uyenza njani iBasan Ke Ladoo
I-Besan ladoo yindawo ethandwayo yase-North Indian elungiselelwe phantse yonke imithendeleko. Jonga ividiyo yeresiphi kwaye ufunde indlela yokwenza i-besan ladoo ekhaya. Yena
Uyenza njani iresiphi ephantsi yeekhalori zeTikka
Inguqulelo yethu ye-paneer tikka iresiphi ayibandakanyi ukujija okunzulu kwezithako. Apha asizukuzicoca nzulu, kuba eyona njongo yethu iphambili kukwabelana ngeeresiphi ezisezantsi zeekhalori zokuba abantu abakwimilinganiselo yokunciphisa umzimba banokuzibandakanya koku kutya, thabatha ityala.
I-Dal Fry Recipe: Landela la manyathelo alula okwenza iDhaba Style Dal Fry
I-Dal Fry recipe sisitya saseIndiya esilungiswe kusetyenziswa iilenti eziphekiweyo emva koko eziqhotswe ngetswele kunye neetumato. Iresiphi iyathandwa kwilizwe liphela kwaye ihanjiswa ngokubanzi kwiindawo zokutyela nakwiidhabha. Skrolela ezantsi kwinqaku ukuze ufunde ngakumbi.
Iresiphi yeAloo Cutlet | I-Potato Cutlet Recipe | Iresiphi elula yokuhlwa ngokuhlwa
I-Aloo cutlet iresiphi yenye yeendlela zethu zokupheka zokutya okuthandayo, kwaye siyayithanda indlela ekrwada ngayo kwaye emnandi ngayo, ngalo lonke ixesha! Ukutya okutyiwa ngamazambane ngokubanzi kunegama nodumo lokuba yeyona nto ibalaseleyo kuzo zonke; kodwa le recipe inentliziyo yethu yokuba kulula ukwenza!
I-Sukhi Arbi Recipe: Uyenza njani iArbi Ki Sukhi Sabzi
I-Sukhi arbi yindlela yokwenene yaseIndiya elungiselelwe ngexesha leminyhadala kunye ne-upwas. Nantsi ividiyo kunye nenkqubo yenyathelo nenyathelo ngemifanekiso.
I-ABC (iApple Beetroot Iminqathe) IJuice Recipe
I-ABC (i-apple beetroot carrot) ijusi iye yaqatshelwa kakhulu ngokuba sisiselo esingummangaliso kwimpilo yakho iyonke. Ikhupha emzimbeni wakho, yenza intliziyo yakho iphile kwaye ikunike ulusu olungenasiphako. Jonga iresiphi yokwazi ukwenza iABC (Apple Beetroot Carrot) yeJuice Recipe.
Iresiphi yeRava Dosa Uyenza kanjani iCrispy Rava Dosa | Suji Ke Dosa
Iresiphi yeRava dosa yenye yezona ndawo zithandwa kakhulu kwisidlo sakusasa kuyo yonke iSouth India kwaye siyakholelwa ukuba le recipe ye-crispy dosa, eyenziwe nge-semolina encinci okanye i-rava batter, iya kuba kwitshathi yakho yokutya yemihla ngemihla nayo, wakube uyizamile!
I-Gujiya Recipe: Uyenza njani iMawa Gujiya Ekhaya
I-Gujiya siswiti yemveli elungiselelwe ngamaxesha eeholide kuyo yonke imimandla yelizwe. Funda indlela yokwenza mawa gujiya. Inikwe apha i
I-Mishti Pulao Recipe: Uyenza njani iBangali yePulao emnandi
IMishti pulao sisifundo esithandwayo esiphambili saseBangali esilungiselelwe kumakhaya onke. Bukela iresiphi yevidiyo. Funda inkqubo yenyathelo ngenyathelo ngemifanekiso.
I-veg protein yokutya ukunciphisa umzimba
indlela elula yokunciphisa amanqatha esisu
uzigcina njani upholile ehlotyeni
indlela yokubeka kajal emehlweni amancinci
ixabiso lesondlo le-urad nge-100g